Call Blocker - မလိုလားအပ်သောဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများကိုပိတ်ဆို့ခြင်းနှင့်သတင်းပို့ခြင်း Android အတွက် APK Download
ပင်မစာမျက်နှာ » အားလုံး Apps ကပ » blocker Call - Block & သတင်းပို့မလိုချင်တဲ့ဖုန်းခေါ်ဆိုမှု
blocker Call - Block & သတင်းပို့မလိုချင်တဲ့ဖုန်းခေါ်ဆိုမှု APK ကို
block, သံသယဖြစ်ဖွယ်ဖုန်းနံပါတ်ဖော်ထုတ်ရန်နှင့်သတင်းပို့ပါ။ Unknownphone.com သင်သည်သင်၏ဥပဒေကြမ်းအတွက်ဖုန်းကို Scan ကို, မလိုချင်တဲ့ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများနှင့်အပိုစွဲချက်များကိုရှောင်ကြဉ်ရန်အရှိဆုံးပြည့်စုံ app ကိုဆောင်တတ်၏။ ထက်ပိုမို 100.000 တယ်လီဖုန်းနံပါတ်များကိုမှတ်ပုံတင်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ website နှင့်ဗြိတိန်နိုင်ငံနှင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းသုံးစွဲသူသန်းပေါင်းများစွာနဲ့ရပ်ရွာထဲတွင်ဖော်ထုတ်မှုနှင့်အတူ Unknownphone.com သငျသညျ၎င်းငျး၏တာဝန်ရှိသူတဦးက app ကိုဆောင်ကြဉ်းဖို့အပျော်အပါးရှိပါတယ်။
- သင်ခေါ်ဆိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်သူကိုသိရန်လိုပါသလား? သငျသညျမလိုချင်တဲ့ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများကအာရုံပါသလား? ကျွန်တော်တို့ရဲ့ app ကိုအတူသင်ချင်တယ်ဆိုဖုန်းနံပါတ်ပိတ်ဆို့နိုင်ပါလိမ့်မည်။
မည်သည့်ဖုန်းနံပါတ်ရှာရန်ကြောင့်ယခင်က UnknownPhone.com အစီရင်ခံထားသည်ဆိုပါကစစ်ဆေးပါ။ သင့်ရဲ့အတွေ့အကြုံကိုမျှဝေပါနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အသိုင်းအဝိုင်းသတိပေးကြပါတယ်။
သငျသညျဖုန်းခေါ်ဆိုမှုလက်ခံရရှိခြင်းနှင့်သင်ခေါ်ဆိုသူသည်အဘယ်သူမျှမစိတ်ကူးရှိသည်ပါသလား? သူတို့ကိုယ်တိုင်ခွဲခြားသတ်မှတ်ဖို့ငြင်းဆန်သလား? ကျွန်တော်တို့ရဲ့လျှောက်လွှာနှင့်အတူဖုန်းနံပါတ် Check နှင့်သင်တို့ကိုခေါ်သူကိုထွက်ရှာပါ။ ဖုန်းပိုင်ရှင်ကိုစိစစ်ရန်နှင့်၎င်းတို့၏ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုပိတ်ဆို့။
အသုံးအများဆုံး Scan ကိုရှောင်ရှား
- သူတို့သည်သင့်ခေါ်မှီဗြိတိန် Block ကိုသံသယဖြစ်ဖွယ်ဖုန်းနံပါတ်အတွက်တယ်လီဖုန်း Scan ကိုပေါ်နောက်ဆုံးပေါ်ဆုံးနဲ့ updated အချက်အလက်များရယူပါ။
- အားလုံးကိုနိုင်ငံတကာဖုန်းခေါ်ဆိုမှု Block ။
- သင့်အဆက်အသွယ်စာရင်းထဲတွင်မစပ်ဆိုင်ကြောင်းကိုဖုန်းနံပါတ်ကနေအားလုံးအဝင်ခေါ်ဆိုမှု Block ။
- အဘယ်သူမျှမ Caller ID ကို / အမည်မသိ / က Hidden နံပါတ် Block ကိုအားလုံးဖုန်းခေါ်ဆိုမှု။
Unknownphone.com ဖုန်းကိုရှာဖွေရေးနှင့် 100.000 20 နိုင်ငံများထက် ပို. အတွက်ဖုန်းနံပါတ်ဖော်ထုတ်ထက်ပိုမိုနှင့်အတူဗြိတိန်နိုင်ငံတွင်အကြီးမားဆုံးဖုန်းကို spam များကို directory ကိုအပေါ်အကြီးဆုံးအသိုင်းအဝိုင်းကဖြစ်ပါတယ်။
CallBlocker Unknownphone.com ရဲ့တာဝန်ရှိသူတဦးကဖုန်းကိုပိတ်ပင်တားဆီးမှု App ဖြစ်ပါတယ်နှင့်သင့်ဖုန်းမှကျွန်တော်တို့ရဲ့န်ဆောင်မှုများအားလုံးဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါလိမ့်မည်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝန်ဆောင်မှု optional subscription ကို
- Unlimited ခရက်ဒစ်။ သင်လိုချင်တာအားလုံးနံပါတ်များကိုများအတွက်အချက်အလက်များရယူပါ။
- သင့်နိုင်ငံအတွင်းရှိအန္တရာယ်ဖုန်းနံပါတ် 500 မှတက်၏အလိုအလျောက်ထောက်လှမ်းခြင်းနှင့်ပိတ်ပင်တားဆီးမှု။
- အလိုအလျောက်အဘယ်သူမျှမ Caller ID ကို / မသိရ / က Hidden ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုပိတ်ဆို့။
- ကန့်သတ်ခြင်းမရှိဘဲ Access ကိုမဆိုဖုန်းနံပါတ်အားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့မှတ်တမ်းများ။
- auto-သက်တမ်းတိုးကြေးပေးသွင်း ($ 1.99 လစဉ် / $ 4.993လ - စျေးနှုန်းတိုင်းပြည်များကကွဲပြားခြားနားသည်)
CallBlocker privacy ကိုရန်သင့်ညာဘက်လေးစားပါသည်။ သင့်ရဲ့ဖုန်းစာအုပ်အများပြည်သူဖြစ်ဘယ်တော့မှပါလိမ့်မယ်။
မကြာသေးမီခေါ်ဆိုခစာရင်း မှစ. ••
အဆက်အသွယ် မှစ. ••
•ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ Block မျက်နှာပြင်၏ဒီဇိုင်းအသစ်။
• app ကိုတပ်ဆင်ခြင်းမပြုမီအဟောင်းခေါ်ဆိုမှုများအတွက်ပမ်ထောက်လှမ်း / ပိတ်ပင်တားဆီးမှု။
• UX ကိုတိုးတက်လာသော။
blocker Call - Block & သတင်းပို့မလိုချင်တဲ့ဖုန်းခေါ်ဆိုမှု